Izahlulo ukufunxa -Shenzhen PhiliFast Electron Limited
I-PHILIFAST ibonelela ngeenkonzo ezikumgangatho ophezulu zohlobo lwe-BOM iinkonzo zokuthelekisa, inenkqubo yokunikezela ecwangcisiweyo nesebenzayo, kwaye iyayiqonda indibano yexabiso eliphantsi yePCB yabathengi.
Sineqela lobuchwephesha le-BOM lokujonga kwakhona idatha yoqobo ye-BOM yabathengi.
Iqela lineminyaka emininzi yamava ekuchongeni izinto ze-elektroniki, ukuhlolwa kwempahla yePCB, njl, kwaye banokufumana iingxaki zecandelo kwi-BOM yoqobo kwangaphambili.
Umzekelo, nokuba imodeli yecandelo igqityiwe, nokuba iphakheji yecandelo iyahambelana nephedi yePCB, nokuba inombolo yecandelo icacile, njl.njl.
Ukuqinisekisa ukuba imodeli yecandelo ngalinye le-BOM icacile, kwangaxeshanye, siya kulisebenzisa ngokucacileyo uphawu lwento leyo, kwaye asizukusebenzisa izinto ezingaziwayo ngaphandle kwemvume yomthengi.
Kwizinto ezingabalulekanga, siya kubonelela ngezinye izinto ezizezinye ekubhekiseni kuzo kubathengi ukunciphisa iindleko zabathengi.
I-PHILIFAST ithenga izinto zokuqala zombane kubathengisi abakumgangatho ophezulu kunye nabasasazi behlabathi jikelele ukuqinisekisa amava endibano akumgangatho ophezulu wePCB.
Inkampani yethu iseke intsebenziswano yexesha elide kunye nabasasazi bezixhobo zombane, kubandakanya i-Arrow Electronics, Avnet, Digi- Key Electronics, Farnell Inkampani, future Electronics, Mouser Electronics, Newark neSamtec.
Ukuthengwa kwecandelo sisitshixo kwimpumelelo yeprojekthi. Umgangatho walo naliphi na icandelo uya kuchaphazela ukusebenza kwayo yonke imveliso yePCB. Ikhonkco lonikezelo lwecandelo elipheleleyo isinceda kuphela ukuthenga izinto ezinqabileyo kwimarike, kodwa ikwaqinisekisa ukuhanjiswa ngokuchanekileyo.
Ukunceda ukunciphisa iindleko zeendleko kunye nokunciphisa ixesha lokuhola, sihlala sigcina izinto ezingaphezu kwe-8000 + ezivela kubenzi bemigangatho. Siqinisekisa indawo yethu kwaye siyakukhuthaza ukuba ukhethe kwisitokhwe sethu.
Kwizinto eziqhelekileyo zokuxhathisa, ii-capacitors, ii-diode, njl.njl. Inkampani yethu inovimba othile wokugcina izinto ezilahlekileyo ezibangelwa ngala macandelo kwinkqubo yemveliso, kwaye kuthintelwe ukulibaziseka ekuhanjisweni okubangelwa yilahleko yecandelo.